Topic: ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း & ဟော်ရီကာချာ
ကျေးဇူးပြု၍ Esipova L. မှပန်းများနှင့်အပင်များ၏ပျိုးပင်များကိုမည်သူဝယ်ယူသည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အမြောက်အများမှာယူခဲ့သည်။ Larisa Esipova ၏ပျိုးခင်း၌ ၁၀၀% ကြိုတင်ငွေပေးပြီးသည့်အခါ ၁၀၀% ကြိုတင်ငွေပေးချေပြီးသောအခါ၎င်းတို့သည်အမြဲတမ်းသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုစိုးရိမ်သည်။
အကောင်းဆုံးသောအရာများမှာ "Poisk"၊ "Aelita", "Gavrish" စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပန်းပွင့်အစေ့ကိုယူလျှင်, အဘယ်သူသည်ယူသာ။ ကောင်း၏?
အကောင်းဆုံးသောအရာများမှာ "Poisk"၊ "Aelita", "Gavrish" စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပန်းပွင့်အစေ့ကိုယူလျှင်, အဘယ်သူသည်ယူသာ။ ကောင်း၏? Aelita သည်စျေးကွက်ကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပန်းပင်မျိုးစေ့များကိုသာရောင်းသည်၊
Actinidia ။ ချစ်ခင်ရသောဥယျာဉ်မှူးများ၊ သင်သည်စပျစ်နွယ်ပင်ကြီးကိုစိုက်ပျိုးသလော။ မင်းသူ့ကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်သလဲ ငါ7နှစ် actinidia Kolomikta ကြီးထွားလာရှိသည်။ တင်းကျပ်စွာကြီးထွားလာသည်, နောက်ဆုံးစုံတွဲ ...
aphids ဆိုတာဘာလဲ သစ်ရွက်ပိုးမွှားသည် aphids ကိုစားသည်မဟုတ်၊ Aphids များသည်နို့စို့အရွယ်ရှိအရွယ်2မီလီမီတာရှိပြီးအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောလိမ္မော်ရောင် (လိမ္မော်ရောင်၊ အနီ၊ အနက်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်) ရှိသည်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ aphids ။ ...
sorrel အစိမ်းရောင်တောက်ပ bug တွေ၏အရွယ်အစား 3-4 မီလီမီတာ၏ကျူးကျော်ခြင်းမှကာကွယ်နည်း? ဓာတုဗေဒမရှိပါ။ သူတို့အားလုံး sorrel ကိုစားကြလော့။ Downy အနာသည် sorrel ၏အဖြစ်များသောရောဂါများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီရောဂါကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် ...
ဆီးချိုရောဂါတွင် redhead ၏အစေ့များကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်းဤသည်မှာဆေးဖက်ဝင်အပင်ဆရာဝန် Tamara Juranskaya ကဤသို့အကြံပြုသည် -“ redhead (camelina) အစေ့၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆိတ်၏ rue (galega) နှင့် centaury ကိုငါရွေးချယ်ခဲ့သည်။ Alternating, I ကိုသုံးပါတယ် ...
thuyas ဘယ်လောက်မြန်မြန်ကြီးထွားနေပါသလဲ။ အကယ်၍ သင်သည် ၂၀ စင်တီမီတာကိုသာအနည်းငယ်ယူလျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်တစ်နှစ်လျှင် ၁.၅ မီတာစိုက်သောအမြစ်သည်အမြစ်မကျခဲ့ပါ။ Thuja သည် ephedra တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရနံအားလုံးသည်ရွက်ကြွေမျိုးစိတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ညံ့ဖျင်းသည်။ ထို့ကြောင့်, ဆင်းသက်သည့်အခါမဖြစ်မနေအခိုက် ...
အမှန်မှာသံလွင်နက်သည်သဘာဝတွင်မတည်ရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချသောထိုမှောင်မိုက်သောသံလွင်များကိုအရောင်ခြယ်ထားပါသလား။ သံလွင်သီးမှည့်သောသံလွင်သီးများကိုသံလွင်သီးများ၊
ဆန်ဘယ်လိုပေါက်သလဲ။ http://ru.wikipedia.org/wiki/Rice ဆန် (လတ်၊ သို့မဟုတ် # ၂၅၃; za) ကောက်ပဲသီးနှံမိသားစု၏နှစ်စဉ်နှစ်ရှည်ခံပင်အပင်များအမျိုးအစား၊ သီးနှံယဉ်ကျေးမှု။ ခေါင်းစဉ်: ဆန်ဟူသောစကားလုံးသည် ၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်ရုရှား၌ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
စမုန်နက်နှင့်ဇီယာစေ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသလား တူညီသောမိသားစုမှစမုန်နက်နှင့်ဇီယာစေ့, chervil, cilantro, ဇီ, anise ။ စမုန်နက်တစ်ပွင့်အဖြစ်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အစိမ်းနှင့်အစေ့တို့သည်မွှေးကြသည်။ အဲဒါကဇီယာစေ့နဲ့မတူဘူး
အစာကျွေးသောစပါးကဘာလဲ အရည်အသွေးနိမ့်ကျသောတိရိစ္ဆာန်အစာများ (ဥပမာမြင်းများ) အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်လူ့အာဟာရအတွက်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များအရမသင့်လျော်သောဂျုံတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်နို့တိုက်ကျွေးမှုအတွက်သင့်တော်သည်။
လက်ဖက်ရည်နှင်းဆီပန်းဘယ်အရောင်ရှိပါသလဲ ဖြစ်နိုင်လျှင် - ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ။ လက်ဖက်ရည်နှင်းဆီသည်အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ S. S. Semina လက်ဖက်ရည်သည်အဝါရောင်ဖျော့နှင့်မက်မွန်အကြားအရောင်ဖြစ်သည်။ Pastel အနံ့သည်ထူးခြားသည်။ ကြည်ညိုသည် ...
အိုးထဲမှာ tulips ကြီးထွားဖို့ဘယ်လို? Tulips တွေကအိုးကြီးတွေမလိုအပ်ပါဘူး။ အချင်း ၁၃ စင်တီမီတာရှိသောဖလားများသည်သင့်လျော်ပါသည်။ အရောအနှောအဘို့, သူတို့က sod မြေ 13%, humus 30% နှင့် ... ယူ
ဆောင်းရာသီအတွက်နှင်းဆီပန်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဘယ်လို? အားလုံး၏အကောင်းဆုံး, spruce အကိုင်းအခက်! ဟုတ်တယ်၊ မင်းနေတဲ့နေရာကိုမင်းပြောရင်ကောင်းမယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဒီမှာ Primorsky နယ်မြေမှာငါနှင်းဆီကို 10 စင်တီမီတာဖြတ်လိုက်တယ်။
မည်သူမဆို Riddle နှင့် Flash မျိုးကွဲ၏ခရမ်းချဉ်သီးများကိုကြဲခဲ့ပါသလား။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေပါ
မည်သူမဆို Riddle နှင့် Flash မျိုးကွဲ၏ခရမ်းချဉ်သီးများကိုကြဲခဲ့ပါသလား။ စိုက်ထားသည့်အနီရောင်မီးရောင်၏သင်၏အထင်အမြင်ကိုမျှဝေပါ။ အဓိကအရာသည်ပျိုးပင်များကိုအလျင်အမြန်မစိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်သည်၊ အလွန်လျှင်မြန်စွာကြီးထွားနိုင်သည်၊ ဒါ ...
ဖရဲသီးအရသာနှင့်နာနတ်သီးအရသာရှိသောဖရုံသီးသည်အစပြုသူတစ် ဦး တွင်မည်သို့ကြီးထွားနိုင်သည်။ x ။ အရသာအရှိဆုံးဖရုံသီးသည်အာဟာရဓာတ်ဖြစ်သည်။ ဒီရွှေဖရုံသီး၏အသီးအပွအရသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအလွန်များမှာ ...
LUK-SEVOK အကောင်းဆုံးနှင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးအမျိုးမျိုးကဘာလဲ? မော်စကိုဒေသအတွက်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Stuttgarten ကချွန်ထက်သောကြက်သွန်နီမဟုတ်ပါ သာမန်။ ငါ strigunovsky ကြိုက်တယ် အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကြက်သွန်နီများတွင်စိတ်ပျက် ဒါပေမယ့်ငါ leeks နဲ့ချစ်ကြတယ်။ အဲဒီနှစ် ...
ဘယ်ဇီယာစေ့အမျိုးမျိုးကိုသင်ရွေးချယ်သင့်သလဲ အခုသူတို့တွေအများကြီးရှိနေပြီ၊ ရွေးချယ်မှုကနေမျက်စိတွေတက်လာတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ခြားနားချက်မရှိဘူးလား။ ငါကဇီယာစေ့တွေအများကြီး ၀ ယ်ခဲ့တယ်။
SOS! မစိုက်မီ gladiolus မီးသီးများကို thrips များမှမည်သို့ကယ်တင်ရမည်နည်း။ မီးသီးများအတွက်ပူရေပူ V. PAVLOV ဆောင်း ဦး တွင်သင်သည် gladiolus မီးသီးများကိုတူး။ သွေ့ခြောက်။ သိုလှောင်ထား၏။ သူတို့ကကယ်ဆယ်ရေးနဲ့သက်ပြင်းချပြီးနွေ ဦး ပေါက်တဲ့အထိ ...
နိုက်ထရိတ်နှင့်နိုက်ထရိုက်အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ အက်စစ်အကြွင်းအကျန်နိုက်ထရစ်အက်စစ် HNO3 နိုက်ထရိတ်၊ ဆားနှင့် Ester များ။ ဆားများ - crystals; ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဆိုးဆေးဆိုးဆေး၊ အမိုးနီးယားနိုက်ထရိတ်၊ alkaline နှင့် alkaline earth ...
55 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,880 စက္ကန့်ကျော် Generate ။